imishini yokugaya nengxenye yokugcina eseceleni, Abahlinzeki | Imishini yokugaya yaseChina nabakhiqizi bezingxenye ezingasebenzi
Umshini wokucindezela wohlobo olusha lwemishini yokuchoboza eyenziwe emazweni omhlaba maphakathi nawo-1980. Ubuchwepheshe obusha bokugaya i-extrusion ikakhulukazi obenziwe ngabo bunomthelela omkhulu ekongeni amandla, futhi buye baziswa kakhulu yimboni yamakhemikhali yamazwe omhlaba njengokugaya kwentuthuko. Ubuchwepheshe obusha bobuciko.
Okusetshenziswayo okusila mpo okusila kuyinto isigayo roller ifakwe 4 ukugaya ezinamasondo.
I-JGM2-113 isigayo samalahle isigayo esinejubane eliphakathi nendawo. Ingxenye yayo yokugaya yakhiwa yiringi yokugaya ejikelezayo kanye nama-roller amathathu wokugaya agxilile agudle indandatho yokugaya.
Usimende mpo wokugaya usetshenziselwa ukugaya izinto zokusetshenziswa zikasimende. Umgomo wayo osebenzayo ngukuthi: izinto zokusetshenziswa zifaka ipayipi lokukhipha ngokusebenzisa i-valve yomoya okhiye ohlangothini ezintathu, futhi ipayipi lokukhipha lingena ngaphakathi kwesigayo ohlangothini lwesihlukanisi.
Isigayo se-JLMS roller sisetshenziselwa ukugaya kusengaphambili isamente klinikhi.